sidda loo sameeyo Muufo Soomaali oo macaan |
Tuke Somalism — August 22, 2015
Asc Waa barnaamijkii Cunta karinta oo isbuucii hal mar aad kalla socotaan Machadka Afkaarta Joogtada Ee Ganacsiga & Bulshada. Maanta waxaan sameyni doonaa muufo Soomaali oo macaan, Insha Allah. Sidda aan wada ogsoonahay marwalbo waxaa muhiimsan in gacamaha la iska dhaqo, iyadoo la isticmaalaayo saabuunta gacmaha ama waxyaabaha kalle ee loogu talla sagalay in gacmaha lagu nadiifiyo. Waxaan ka wada marqaati nahay in nadaafada ay tahay shey qaaali ah. Marka horre sidda caadiga ahayd waxaad soo diyaarsanaysaa dhammaan allaabtii aad wax ku karsani laheed iyadoo nadiif kuu ah.
Waxaad isku walaaqeysaa dhammaan allaabtii aan kuu sheegay ayaad si fiican isku dhex galineysa hadana burka ayaaad Ku dareysaa, burkana markaas inta ku filan waa inaad adiga garataa inta kugu filan burka markaad Ku darto waad Ku qaseeysaa illaa intuu ka aadkaado burka si fiican u xashee burka.
Xashaka aad ayuu ugu wacanyahy wuxuu noqon bur qurux badan oo jilcan markaad xashto burka inuu adkaado lama rabo inuu jileec saa’id ah noqdana lama rabo ee waxaa loo baahanyahay dhex-dhexaad.
Fadlan wixii aragti ah inaad ka hadasho waan soo dhaweynaa, Insha Allah. Waxaanu soo bandhigi doonaa barnaamijyo badan oo ku saabsan cunta karinta, Insha Allah